Fallo: Maxaa keenay Isbaddalada Boqortooyada Sacuudiga? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Fallo: Maxaa keenay Isbaddalada Boqortooyada Sacuudiga?
Fallo: Maxaa keenay Isbaddalada Boqortooyada Sacuudiga?
Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan
Si lama filaan ah ayaa guddiga la dagaalanka musuq-maasuqa boqortooyada Sacuudi Carabiya oo 24 saac ka hor la aas-aasay hogaamiyana u yahay dhaxal Suge Maxamed bin Salmaan, ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in 11 Amiir oo ka tirsan qoyska reer boqor la xiray xilalkii ay hayeenna laga qaaday, halka Afar wasiir iyagana xilalkii laga xayuubiyey ka ddibna xabsiga ladhigay.
Waxaa lagu eedeeyey dadkaasi la xiray dhammaantood in ay ku takrifaleen awoodihii lagu aaminey islamarkaana lagaco ay lunsadeen.
Waa markii ugu horeysey oo dhacdadaan oo kale ay ka dhex dhacdo reerka boqotooyo ee dalka Sacuudi Carabiya dhexdooda.
Dadka la xiray ayaa waxaa ka mid ah, Amiir Waliid bin Talaal oo ah, taajir kamida tujaarta adduunka ugu caansan. $17 bilyan oo doolar ayaa lagu sheegaa hantidiisu in ay kor u dhaafeyso, waxaana la tilmaamayaa in xariggiisu saameyn ballaaran ku yeelan doono sayladaha Caalamka.
Dadka ka faalooda siyaasadda Sacuudiga ayaa ku tilmaamay xarigga raggaan in ay tahay tallaabo loogu gogol xaarayo dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah wiil uu dhalay Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis Al-sacuud, si aanu caqabado ugala kulmin marka aabihi xilka ku wareejiyo.
Ragga la xiray ayaa waxaa ka mid ah, Mutcib bin Cabdallah, oo uu dhalay boqorkii hore Cabdlla bin Cabdulcasiis, waxaa uu Mutcib ahaa wasiirka ciidamada ilaalada boqortooyada. Waxaa lagu tuhunsanaa in uu u janjeeray dhanka dhaxal sugihii xilka laga fariisiyey Maxamed Bin Naaif.
Falan-qeeyaasha siyaasadda Sacuudiga, ayaa walwal ka muujinaya isbaddalada lama filaanka ah ee sida joogtada ah isaga daba dhacaya.
Culimada dhanka wahaabiyadda aad ugu dhaggan ayaa ka walaacsan tallaabooyinka boqorka, halka kuwa casriga ah iyo dumarkuba ay aad ugu riyaaqsan yihiin siyaasadda fur furidda boqortooyada oo ay ugu horeeyaan haweenka oo loo ogolaaday wadidda baabuurta Sanadka soo aadan ee 2018-ka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhacdadaan loo arkaa mid saamayn ku yeelan doonta mustaqbalka Dalka Sacuudiga iyo gobolkaba/Bariga Dhexe.
Dunida Muslimka ayaa si gaara indhaha ugu haya sacuudiga maadaama uu gacanta ku hayo labada Masjid ee barakaysan oo kala ah Majidul Xaraam ee Makka Almukkarama iyo Masjid al Nabawi ee Madiina Almunawara.
Maxamed bin Salmaan, oo ah ninka ka dambeeya siyaasadda furfurnaanta leh ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa lagu tilmaamaa waxa afka qalaad lagu yirahdo “ Reckless and ambitious” oo micnaheedu yahay “ Xasaasiyad iyo Hiigsi”.
Waxaa uu keenay Mashruuc loogu magac daray “ Hiigsiga Sacuudiga ee 2030-ka” kaasi oo sheegaya in dadka Sacuudiga ay ka baxaan ku tiirsanaata saliidda ama shidaalka dalkaasi uu qaniga ku yahay. Mashruucan ayaa Maxamed bin Salmaan waxaa uu ku dhisi doonnaa Jaziirado casri si loo soo jiido isha dalxiisayaasha Caalamka.
Warbaahinta dalalka Carabta ayaa tallaabooyinkan is daba joogga ah ee Sacuudiga maanta ilaa iyo xalay si wayn uga hadlaya. Waxaa ay sheegayaan in tallaabooyinkan cusub ay yihiin buug cusub oo u furmay Sacuudiga.
Waxaa tani la sheegay sidoo kale in ay tahay mid u eg fulinta balan-qaadyadii uu sameeyay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, taasi oo ahayd in dhisi doono Sacuudi Cusub oo noqon doona dowlad islaam oo dhex-dhexaad ah.
W/Q/ Yusuf Xasan
Previous articleAkhriso: Heshiiska Dowladda Dhexe iyo Dowladaha Xubnaha ka ah
Next articleHooyo gabadheeda uga tagtay Warqad dardaaran ah oo ay dad badan la qiiroodeen